0.1 "سلام جری ، پهلوی بانان لاکوگ کوگو همانین کارا لاکتا sida adiga?"
0.2 حبکا شماره 2: فیس بوک
0.3 حبکا شماره 3: Cilmi-baarista Qalabka Dugsiga Old-Old
0.4 کلید واژه Waa maxay waxa ku jira xogta?
0.5 موم تار Isticmaalida cilmi-baaris leh oo lagu barto طاقچه: Bandhig degdeg ah
1 Gaadiidka هدفمند
1.3 3. تبلیغات فیس بوک
"سلام جری ، پهلوی بانان لاکوگ کوگو همانین کارا لاکتا sida adiga?"
قار waxay rabaan bilaw barta oo dakhliga qaar ka dhigo internetka. Kuwa kale، si ay uga baxsadaan jahawareerka joogtada ah ee shaqada، ama si ay u balaadhiyaan ganacsigooda internetka، ama inay joojiyaan shaqadooda 9-ilaa-5، iwm.
Waxaan runtii rabaa in aan caawiyo kuwa anan ogahay inay arrintan ku guuleystaan. لااکیین ، waxaan kaliya oo an wadaagaa inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta badan inta bada inta badan inta.
Sidaa awgeed، waxaan qorayaa qoraalkan dheer si aan ula wadaagno casharrada an bartay sida imtixaanka sanadka ugu Dambeeyay ee 15.
حبکا شماره 2: فیس بوک
Warbaahinta bulshada ee ugu weyn adduunka ayaa runtii aa aalad weyn oo lagu fahmo niche-ka cusub eead soo galayso. Waxbadan ka baro bartilmaameedkaaga، bartilmaameedsada tartamayaashaada، hel xagal sidii aad ula tacaali lahayd nalkaaga، iyo wixii la mid ah.
صفحه شخصی در فیس بوک (waxaad abuuri kartaa mid ka ho intaadan bilaabin bloga، waa bilaash)، meesha ugu horaysa ee aad eegto waa saldhiggaaga masraxaada. Ku qaybi qaar ka mid ah taageerayaashaas "مشخصات" oo fiiro gaar ah u leh niyadjabkooda (lab / anddig، meelo، guursaday / hal / isqaba، dada، iwm) iyo danahooda.
Ku biir bulshada Kooxda Facebook – akri babka isticmaala wadahadalka si ay u fahmaan dhibaatooyinkooda iyo baahidooda.
Wixii kuwa leh bogga Facebook، waxaad u tagtaa Insights> بررسی اجمالی> صفحات برای تماشای. Tani waa halka aad ka heli karto oo barbar dhigi karto boggaga la soo bandhLOAD ee Facebook. Waxaad riixi kartaa xiriir kasta si aad u ogaato fariimaha caanka ah ee lagu daabacay boggaan.
Bogagga la daawado – sida ku so jeedinta Facebook ee mid ka mid ah bogagga anan maareeyo.
Raadi mowduucyada mawduuca ku saabsan niche – Waa maxay boodboodka ugu dambeeyay ee magaalada؟ Miyad ka heli kartaa xagasha cusub ee blogka adiga oo eegaya isbeddelladan?
Ku balaarin kartaa niche cusub adoo eegaya dhaqdhaqaaqyada kale ee ciyaartoyda – Tani waxay aheyd sidii aan u ogaaday nuqulka sawirada markii an darsaday webka (CSS / jQuery / HTML5) وبلاگ ها.
Fahmee dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah – Halkee ayay ku qaataan internetka؟ واا ماکسای dhibaatooyinkooda؟ Ma siin kartaa xal?
Eeg sababta ay dadku uga iibsanayaan tartamayaashaada – Miyad bixin kartaa wax la mid ah oo lacag Sameynaya?
Eeg sababta ay dadku uga iibsanin tartamayaashaada – علاءآبادودا miyuu cajib leeyahay؟ Waxaa laga yaabaa inaysan ku iibineynin mid sax ah. Miyaad wax ka qaban kartaa oo aad ku guuleysan kartaa martida?
Qoraan xarfo iyo mawduucyo wacan oo wanaagsan – Soo ogow kuwa Facebook ee ku so so biiraya ugu sareeya، qor qoraallada isku midka ah.
حبکا شماره 3: Cilmi-baarista Qalabka Dugsiga Old-Old
Waxaan hubaa inaad hadda makhashay cilmi-baaris muhiim ah.
آما سوگ … ma lihin؟ Waa hagaagayaa inaanan garaacin faras dhintay، sidaas darteed Halkan waa akhris wanaagsan oo bilowga ah.
Dheecaan وer ah sida erayga muhiimka ae eayga gaaban (اعتبار: Soo dir Fox).
Cilmi-baarista ereyga waxaa badanaa la Sameeyaa bilawga ololaha SEO. Ujeeddadeeda، inta badan maaha، waa in la ogaado ereyada la Raadiyay ee soo noqnoqota (waa gaaban ama gaaban waqti dheer) oo tilmaamaya tilmaamaha ololaha.
کلید واژه Waa maxay waxa ku jira xogta?
Hase yeeshee، sida ugu aqoonta badan ee wax soo saarka ganacsadaha – waxaa jira waxyaabo badan oo ay ka muuqato xogta muhiimka ah. Iyada oo ku habboon qodobbada muhiimka ah، waxaan sidoo kale fahmi karnaa kuwa soo socda si ka fiican (iyo laga yaabo inay sidoo kale so so bandhigaan fursado ganacsi oo cusub):
Baadhitaanno badan = baahida sare؛ Natiijooyin badan ayaa lagu so celiyey bogga natiijada raadinta = sahayda sare.
Tusaale ahaan: Koobiyeyaasha – نیکون ، کانن ، سونی؛ بالایایین بیل ، مالدیو ، هاوایی؛ برای میزبانی وب – iPage ، BlueHost ، Hostgator؛ musharaxiinta – تیلور سویفت ، لینکین پارک ، برونو مریخ.
Guud ahaan marka la hadlayo، ujeedka iibsashada ayaa ka sarreeya marka ay jiraan baaritaanno badan oo ku saabsan ‘widget eegista’، ‘Moodhka tirada iyo magaca’، ’10 sumadaha ugu fiican’، ‘Iibso widget khaka toos ویا bedelkeeda ، raadinta ‘taariikhda aaladda widget’، ‘widget cabdi’، ama ‘samaynta aaladda widget’ ayaa loo badinayaa in aan loo beddelin macaamil ganacsi.
Kuwa xayeysiiya oo badan oo ku dhawaaqaya erey gaar ah، qiimaha ganacsi ee sarreeya wuxuu u yahay ereygan raadinta.
موم تار Isticmaalida cilmi-baaris leh oo lagu barto طاقچه: Bandhig degdeg ah
Markii an letabay markii ugu horeysay، dad badan oo websaydh ah (warqad – markale ‘blogger’ ma ahayn erey caan ah) waxay ku tiirsan yihiin qalab la yiraahdo "اورتور" – halkaas oo aad si fudud u geli karto ereyga raadinta iyo nidaamkuna wuxuu ku siin doonaa shakhsi adag inta jeer ee ereyga la baaro، bilaash آه. Ka dibna waxaan isbarbardhigi doonaa nambaradan natiijooyinka natiijooyinka soo noqnoqday oo ay xukumaan tartanka (iyo faa’iidada) ee طاقچه.
کلید واژه Qorshaha Google waa mid ka mid mid ah qalabyada muhiimka ah ee aan weli isticmaalo maanta (haddii aad awoodi kartid inaad bixiso qalabka lacag bixinta، waxaan ku talinayaa AHREFS o SEM Rush).
Sawirada so socda، waxaan soo bandhigi doonaa sida aan u isticmaalo qalabkaan si aan u barto niche oo aan u fasirno xogta la helay. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa waqti aad u yar (ka yar saacadaha 30) ama waxay qaadan kartaa maalmo si loo dhammeeyo. Waxay ku xiran tahay inta ay le’eg tahay liiska muhiimka ah ee liiska muhiimka ah iyo sida qoto dheer ee aad dooneysid inaad ku nasto si aad u fahamto muuqaalka ganacsiga.
Sawirrada filimka ayaa iyo jeer ahaa mid ka mid ah ururrada an jeclahay. Anigu runtii ma soo aruurin، laakiin waan ku faraxsanahay farshaxanka iyo qiimaha dareenka ah. Aynu aragno Haddii an daneynayno fikradayda fikrada وبلاگ نویسی faa’iido leh. Ogow in ananan samayn wax cilmi ah ka hor inta aanad qorin hage – sidaas ayaan ahay sida aad hadda xaq u leedahay.
Raadinta garaafka، waxay u muuqataa in mawduucdu ay ka luntay xakamaynta internetka – taas oo ah mid caqli-gal ah haddii aad eegto wakhtiga dadku ku qaataan YouTube-ka maalmahan.
Hoosudhaca، waxaan sidoo kale arki karnaa in inta badan dadka raadinaya inay ku yaalaan Mareykanka، کنیا، هند، استرالیا، iyo Kanada.
Si aad u fahamtid jaantuska si wanaagsan، waxaan badanaa isbarbardhigaa raadinta raadinta aan la garanayn oo aan wax ka ogaanayo. Tusaalahan ، waxaan ku darey ereyga raadinta "dib u eegista marti gelinta". Waxaad arki kartaa in dadkaas a jiraan dad badan oo Raadinaya "sawirada filimada".
Marka xigta، waxaanu tagi doonaa Qorshaha Keydka ee Google si loo helo fikrado badan.
کو قور "faylka filimada" sanduuqa raadinta oo ku dhufo "Fikto Hel".
Bogga ugu horreeya ee natiijada (fiiri sawirka hoos ku qoran) ayaa muujinaya in ay jiraan baaritaano fara badan oo loogu talagalay sawirada filimada (41،900 + raadinta bil kasta)، sawirada filimka naxdinta leh (5،600 + filtataaaaaaaaaaaaaa filimada (3،400 + raadinta bil kasta)، Hollywood sawirada filinka (1600 + raadinta bishii)، iyo wixii la mid ah. Sidoo kale، waxaa sidoo kale jira dalab aad u sarreeya oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan abuurista sawirada filinkaaga (22،000 bishiiba).
Si aad u qaaddo hal tallaabo، waxaan ku dhejin karnaa erayga muhiimka ah ee faahfaahin dheeraad ah. تانى واا هالكا آن كو فهمی كارنو راادیهها ‘ujeedada si ka fiican. Ka taxadar nooca macluumaadka ay raadinayaashu raadinayaan.
Miyeyn karnaa inaan iibinno niyaddeena raadinta (haddii qorshahayagu yahay inaan si toos ah u iibino sawirada filimada)؟ وبلاگ نویسی Sidoo kale، xarumahani waxay noqon karaan mawduucyada.
آلاداها محییمکا آه ee ku jira "Ku samee Farshaxanka Filimada" – رادیهیاشانی واکسای و بدان تاای اینی ردیایان تابوبار iyo qalabka daabacaadda.
Si aad u hesho aragti dheellitiran mowduuceena، an tagno Ubersuggestiga fikrado badan oo muhiim ah.
Waxaa suurtagal ah in sawirada filimada jigsawaa a tahay fikrad ganacsi oo wanaagsan.
Maxaa dhacaya haddii an derbideynin inaan iibino alaabta jireed؟ Wadad ogtahay – ma ahan wax faa’iido le iyo sahaydaba. میهان کالیا کارناا ائو ایان اییبین کارناا بوشکا xayeysiiska؟ Si aad uga jawaabto su’aashan، an isku dayno raadinta khadka ah ee Google iyo arag haddii aan ku ogaan karno xayeysiiyaha ama barnaamijyada midnimada.
Sidoo kale، waxaad fiirin kartaa habka suuq-xayeysiinta ee xayaysiinta – ma waxay ku xayeysiinayaan boogaha sare ee xayeysiisyada raadinta؟ Hadday sidaas tahay، nooca blogka؟ Ma iibin kartaa xayaysiinta si toos ah ganacsatadaas؟ Si looga faa’iideysto faa’iidada mawduucan، waxaan ku dari karnaa xogtan muhiimka ah ee loo yaqaan ‘Spyfu’ si loo ogaado inta xayeysiiyayaashu ay kharashka bidiyaan.
سی عاد تو SII dheeraato، waxaa دانلود Laga yaabaa inaan dooneyno inaan qodno natiijooyinka raadinta bini’aadamka (bogga xiriirrada، bogsashooyinka bogga، saamiyada warbaahinta bulshada، IWM) سی مستراح ARKO سیدا AY تو ADAG tahay / تو سهلان tahay در lagu tartamo SEO.
Hadda waxaan haysannaa dhamaan suuqyada lagama maarmaanka u ah – waa waqtigii la go’aansan lahaa. Miyay tahay inaan ku boodno؟ تانی miyuu wanaagsan yahay؟ Maxay noqon lahayd xagal wanaagsan oo la xidhiidha طاقچه؟ Waan kuu dhaafi doonaa si aan u soo gabagabeeyo.
Mid ka mid ah، si kastaba ha ahaatee، waxaan jeclaan lahaa in aan caddeeyo ka hor inta aanan soo gabagabeyno qaybtan – wuxuu ku saabsan yahay sida aad u go’aansato niche.
قار badan oo khabiiro ah waxay soo jeediyaan waxyaabo cusub si ay uga fogaadaan tartanka SEO tartan ee tartanka ah iyo inay qaataan آبجو yar oo yar marka la dooranayo niche.
Waxaan aaminsanahay in ka so so horjeeda dhabta ah. Waa inaad isku daydaa balli aad u ballaaran (shuruudaha raadinta bartilmaameedka leh dalab badan iyo tiro badan oo tartan weyn) sababtoo aa taasi waa meesha ay dhagaystayaashu iyo lacagku yihiin.
Si aad u Sameyso lacag diyaarsan bartaada، waaaad soo jiidataa gaadiid ku filan، tarjumaada.
waxay had iyo jeer ahayd furaha guusha internetka waxayanka dhagaystayaasha la beegsanayo (iyo u adeegida macluumaadka ay rabaan).
Gaariga taraafigga ah ee aad udheeraato waxaad blog ka heleysaa، lacag badan oo aad Sameyn kartid.
Waa xisaab fudud – Aan sheegno in aad maamusho blog-ka DIY oo aad ka iibiso farshaxanka gacanta. Qiyaasta celceliska blogda ee celceliska celceliska waa 3٪ celceliska qiimaha celceliska waa 25 $. Celcelis ahaan، booqdayaasha 100 ee kasta waxaad samayn doontaa iibinta 3 oo waxay Sameyn doontaa 75 $ waxay ahaan doonaan lix iibsasho iyo 150 $ way faaii karaan wadada.
Kahor intaanan u galin xeeladaha gaarka ah iyo istiraatiijiyadaha taraafikada، aynu ka hadalno istiraatiijiyad guud oo weyn.
Si arrintan loo sameeyo، waxaad u baahan tahay:
مالگاشادو لاکاگ iyo dadaal badan oo xeelad آه
Xogta saxda آه
Haddii aadan isticmaalin jaangooyooyinka shabakada saxda ah si ay ula socdaan horumarka iyo ganaaxa qalabkaaga cusub، ka dibna waxaad qaadan kartaa laba tallaabo oo dib ugu noqo meeshii aad hore u socon lahd.
Iyada oo ku xiran nooca nuujinta iyo heerka fahamka، waxaad u eegi kartaa noocyada kala duwan ee tirakoobka.
Marka hore eeg، Google Analytics warbixinta ayaa noqon karta middle aad u adag. تیروئینین بدان! Oo waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn qaar ka mid ah metrics ama fikradaha.
Laakiin nasiib wanaag، runta waa:
Nambarada / fikradaha maahan mid aad u adag، iyo
Si daacadnimo ah uma maleynayo در وبلاگ نویسان ay tahay inay waqti badan ku qaataan warbixinta Google Analytic.
سی فودود Ujeedadaadu waa inaad ku dhisto barta wanaagsan ee dadka isticmaala، adoo isticmaalaya saacado kadib saacadaha barashada farsamooyinka ka dambeeya lambarrada Google Analytic.
كلفاددیادا / Isticmaalayaasha
هرکا سو بیکسیتانکا
Tusaalaha nolosha dhabta آه
Google Analytics (قداشادا)> Dhamaan Gaadiidka> عشا / Dhexe)
(صفحه اصلی ، داشبورد Google Analytics)> حبداقانکا> Mawduucyada Mashruuca> Dhamaan Bogagga.)
Fursad ka srereeysa liiska sare ee Google (sida sicirada saamileyda ee saameynta saamaynta shabakadda Google)
Iyada oo ku saleysan xogtan، waxaan hadda haystaa dhowr bog oo ah waxay bixisaa heerka ugu wanaagsan ee ka qaybqaadashada.
Su’alaha an isweydiiyay dhacdadan:
Ma ku dari karaa macluumaad وeraad ah boostada?
Ma heli karaa qof inuu noqdo marti wareysi oo anan ku daro qiimaha boostada?
Ma jiraan macluumaad cusub oo an ku ku dari karo maqaalka?
Taasna waxaa laga yaabaa inaysan ku siinin kicin degdeg ah oo ku socda barta internetka. Hase yeeshee، sida kubbooyinka barafka ah – baaxadda ayaa ka weyntahay xeelado badan.
Hadda oo an ku dhaqaaqno istiraatiijiyadda guud، waa waqtigii anan ku fiirin lahayn xeelado gaar ah oo taraafik ah oo blog ah.
Ayadoon loo eegin sida Google ay u asaasayso habdhaqanka وjinta martida – tabahaasi wuu shaqeeyaa. Ku qorista qoraallada martida tayada lee ee baloogyada dadka kale si fudud ayaa ah habka ugu hufan ee lagu gaadho dhagaystayaasha lala beegsanayo laguna dhiso akhristaha blog.
Haddii aad ku cusub tahay boosteejada martida، Lori ayaa si faahfaahsan u qoray Sidee-u-hagaha boostada martida horay u sii soco.
Furaha guusha، sida aan u arko، waxa ay raadineysaa blogyada saxda ah – kuwa haysta akhristayaasha dhabta ah iyo taageerayaasha warbaahinta bulshada. Waxaad isticmaali kartaa تاپسی یا Buzz Sumo si aad u aragto baloogyada caanka ah iyo saameyn ku yeelashada wershadahaaga. Ama، si sahlan ayaad u qaadan kartaa fiiro gaar ah qeybta faallooyinka si aad u aragto haddii akhristayaasha ay la falgalayaan kuwa wax qora. had iyo jeer maskaxda ku hay inaad wax ku dhajinayso akhristayaasha dhabta ah (sidaa darteed tayada waxyaabahaaga ay muhiim tahay). Ha ilaawin ku dhejinta dhejinta boggaga leh Google sare laakiin akhristayaasha eber – dhaqankan si fudud uma shaqeeyo 2015.
Tusaalooyinka nolosha ee Dhabta آه
Ku dhufatid qoraallo le natiijooyin wanaagsan.
Khubarada 30 waxay ku siinayaan talooyin وeraad ah
Qalabka SEO ugu fiican oo ay taliyaan khabiirada warshadaha
3. تبلیغات فیس بوک
فیسبوک waa qaab kharash ah oo waxtar leh (waxay u socotaa sida hooseeya ee 0.06 $ / shabakad ku xiran tahay warshadaha qaarkood) si aad ugu qaadatid booqdayaasha cusub ee loogu talagalay. Qaybaha caqabadaha ku ah xayeesiinta Facebook waa inaad u baahatid inaad tijaabiso waxyaabo kala duwan (dalal kala duwan، dalal kala duwan، danaha kala duwan، iwm) si loo guuleysto.